Vivo Y95 ကို မကြာခင်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရတော့မလဲ? | MyTech Myanmar
Vivo Y95 ကို မကြာခင်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရတော့မလဲ?
Vivo ရဲ့ Y95 ဖုန်းလေးတွေကတော့ ဒီနိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဝယ်လို့ရနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို 91 Mobiles ကနေ အသေးစိတ်အချက်လေးတွေလည်း ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ Screen ရှေ့ဘက်ထိပ်မှာ Vivo က Halo လို့နာမည်ပေးတဲ့ Waterdrop Notch လေး ပါမှာဖြစ်ပြီး ဈေးကတော့ $205 ဝန်းကျင်လောက်လို့ သိရပါတယ်။
တခြားဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အရင်မဝင်သေးဘဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို အရင်ဆုံးဝင်မယ့်ပုံစံပါ။ 6.22-inch IPS LCD Screen ကိုမှ ထိပ်ဘက်မှာ Notch သေးသေးလေးနဲ့ဖြစ်ပြီး 8MP Front Camera ပါပါမယ်။ Screen Resolution ဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့ မသိရသေးပါဘူး။
သုံးထားမယ့် Chipset နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း မသိရသေးပေမယ့် RAM ကတော့ 4GB နဲ့ လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ Built-In Storage အနေနဲ့ကတော့ 64GB ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံပိုင်းအတွက်ကတော့ နောက်ကင်မရာကို 13MP+5MP Dual Camera ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Battery ကတော့ 3260mAh Battery ဖြစ်ပြီး Android 8.1 Oreo ကို အခြေခံထားတဲ့ FunTouch OS နဲ့ထွက်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။
Y95 ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ Vivo Y83 ရဲ့ အဆက်ဖြစ်နိုင်ပြီး Y95 နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် Y83 လေးတွေက Notch ဆိုဒ်ပိုကြီးပြီး ကင်မရာကလည်း 13MP ကင်မရာနဲ့ RAM 3, Internal Storage 32GB နဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း Y83 တွေတုန်းက $192 ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် အိန္ဒိယမှာအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်လာမယ့် Y95 နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထွက်မယ့်ရက်အတိအကျကို မသိရသေးပေမယ့် လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းပဲ မိတ်ဆက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့အတွက် ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ စောင့်ရတော့မှာပါ။ မကြာသေးခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Y93 တွေကတော့ Snapdragon 439 SoC နဲ့ Y97 မှာတော့ Helio P60 ကိုသုံးထားပြီး အခု Y95 ကတော့ သူတို့၂ခုကြားက ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် Mid-Range ဖြစ်တဲ့ Helio P22 နဲ့ A22 တစ်ခုခုနဲ့ ပွဲထွက်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
Vivo ရဲ့ Y95 ဖုနျးလေးတှကေတော့ ဒီနိုဝငျဘာလထဲမှာပဲ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ဝယျလို့ရနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆို 91 Mobiles ကနေ အသေးစိတျအခကျြလေးတှလေညျး ထှကျလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး အဲဒီအတိုငျးဆိုရငျတော့ Screen ရှဘေ့ကျထိပျမှာ Vivo က Halo လို့နာမညျပေးတဲ့ Waterdrop Notch လေး ပါမှာဖွဈပွီး ဈေးကတော့ $205 ဝနျးကငျြလောကျလို့ သိရပါတယျ။
တခွားဘယျနိုငျငံမှာမှ အရငျမဝငျသေးဘဲ အိန်ဒိယနိုငျငံကို အရငျဆုံးဝငျမယျ့ပုံစံပါ။ 6.22-inch IPS LCD Screen ကိုမှ ထိပျဘကျမှာ Notch သေးသေးလေးနဲ့ဖွဈပွီး 8MP Front Camera ပါပါမယျ။ Screen Resolution ဘယျလောကျရှိမလဲတော့ မသိရသေးပါဘူး။
သုံးထားမယျ့ Chipset နဲ့ပတျသတျပွီးတော့လညျး မသိရသေးပမေယျ့ RAM ကတော့ 4GB နဲ့ လာမယျလို့သိရပါတယျ။ Built-In Storage အနနေဲ့ကတော့ 64GB ပါမှာဖွဈပွီးတော့ ဓာတျပုံပိုငျးအတှကျကတော့ နောကျကငျမရာကို 13MP+5MP Dual Camera ကို တပျဆငျထားပါတယျ။ Battery ကတော့ 3260mAh Battery ဖွဈပွီး Android 8.1 Oreo ကို အခွခေံထားတဲ့ FunTouch OS နဲ့ထှကျလာမယျလို့သိရပါတယျ။
Y95 ဆိုတဲ့နာမညျကတော့ Vivo Y83 ရဲ့ အဆကျဖွဈနိုငျပွီး Y95 နဲ့ယှဉျလိုကျရငျ Y83 လေးတှကေ Notch ဆိုဒျပိုကွီးပွီး ကငျမရာကလညျး 13MP ကငျမရာနဲ့ RAM 3, Internal Storage 32GB နဲ့လာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကလညျး Y83 တှတေုနျးက $192 ပဲရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျ အိန်ဒိယမှာအရငျဆုံးမိတျဆကျလာမယျ့ Y95 နဲ့ပတျသတျပွီး ထှကျမယျ့ရကျအတိအကကြို မသိရသေးပမေယျ့ လာမယျ့ရကျသတ်တပတျအတှငျးပဲ မိတျဆကျလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ရတဲ့အတှကျ ရကျပိုငျးလောကျပဲ စောငျ့ရတော့မှာပါ။ မကွာသေးခငျက တရုတျနိုငျငံမှာ မိတျဆကျခဲ့တဲ့ Y93 တှကေတော့ Snapdragon 439 SoC နဲ့ Y97 မှာတော့ Helio P60 ကိုသုံးထားပွီး အခု Y95 ကတော့ သူတို့၂ခုကွားက ဖုနျးတဈလုံးဖွဈတဲ့အတှကျ Mid-Range ဖွဈတဲ့ Helio P22 နဲ့ A22 တဈခုခုနဲ့ ပှဲထှကျလာနိုငျခရြှေိပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-11-07T02:18:36+06:30November 7th, 2018|Mobile Phones, News, Vivo|